युवा र बेचैन, यो आफ्नो प्राथमिकता स्वाग शैली दिन गर्नेहरूको नाम हो। "यो के हो?" - पहिले नै तीस वर्ष कोसेढुङ्गो पार गरेका ती आश्चर्य हुनेछ। जवाफ उनीहरूलाई चकित हुनेछ।
उज्ज्वल ककटेल मा शैलीहरू को मिश्रण - स्वाग
शब्द को अनुवाद अर्थ "फैशनेबल।" शैली, संस्कृति rnb को पालने मा जन्म, मोह, खेल फैशनेबल, सडक गुंडे को एक भन्दा हडताली तत्व लिए। र अझै पनि एक जवान विद्रोही प्राण चाहिन्छ? निस्सन्देह, boho-शैली को तत्व र ग्रन्ज को एक सानो बिट।
यो भन्दा प्रेरणादायक लुगा रहन पनि सम्भव छ किनभने SVEG शैली, अधिक बालिका जस्तै छ "छिमेकी केटी।" एक नाजुक शिफन संग संयुक्त - त्यसैले, मनैदेखि rhinestones संग सजाया र छोटो डेनिम छोटकरीमा, उच्च एडी र खुलस्त सैन्य ज्याकेट संग महान हुनेछ तल्ला गर्न पोशाक।
स्वाग को शैली मा तैयार गर्न, केही नियमहरू पालन गर्नुपर्छ। पहिलो भन्छन्: आधारभूत किरा सधैं उत्तेजक सडक लुगा हुनुपर्छ। र छोटकरीमा, टोपी, खेल Blazers असीमित नम्बर को अस्तित्व आवश्यक उत्तेजक inscriptions संग tops किनभने।
दोस्रो नियम विशेष सजावट छ आवश्यक छ। Repperskie सुन चेन, को 90 को दशक को reminiscent, एक मुट्ठी को रूप मा घन्टी र सधैं एक विशाल सुनको चमक घडीहरू - को श्रेणी देखि कुराहरू स्वाग शैलीमा अवश्य-छ। posturing - यो के हो? मात्र भाग मा, वास्तवमा, artifice र अन्य क्षेत्रको कठोरता लागि आफ्नो घृणाको एक प्रकटीकरण।
तेस्रो नियम अनुसार, स्वाग प्रशंसक मात्र होइन वस्त्र र सामान, तर पनि सामान्य उपस्थिति बाहिर खडा गर्न बाध्य छ। र किनभने अति asymmetric Hairstyles, भेदी र टाटु को आवश्यक छ।
चौथो नियममा जुत्ता गर्न विशेष बुझाउँछ। यी जूता वा जूता थिए मनमोहक छ। र एक विशेष शास्त्रीय ख्याल छैन वा धेरै लोकप्रिय अब एक मंच वा एक पिन संग प्रदान गरिन्छ। कुनै खेल जूता हो भने, spikes संग जूता पूर्ण तिनीहरूलाई, महिला र पुरुष संस्करण दुवै प्रतिस्थापन गर्नुहोस्।
स्वाग को शैली मा पोशाक
"उनको के हो / यो लुगा?" - को प्रशंसक शान्त stylistic निर्देशन सोध्छन्। र प्रश्न छैन तुच्छ छ। पछि sveg किरा जो कोहीले छोड्न सक्नुहुन्न indifferent, तिनीहरूले शैली को साँचो प्रशंसक देखाउन विशेष गरी यदि - आफ्नो प्रकारका लज्जित छैन, पुष्ट केटी।
निम्नानुसार प्रत्येक दिनको लागि विकल्प पूरा गर्न सकिँदैन: साना frayed छोटकरीमा, जुत्ता उच्च एडी संग animalistic रंग, boho-निर्देशन देखि जूता र स्वेटर अनुकरण उच्च कालो लेग्गीन्स। यो अनौठो देखिन्छ? त्यसैले यो परिणाम चाहन्थे।
थप "शान्त" विकल्प देखिन्छ, यो गुरु स्वाग को सिफारिसहरू, कालो टोन, जीन्स, कलिलो, छोटो corset शीर्ष, समतल पाठ्यक्रम मा जूता र खेलकुद झोला बावजुद सम्हाल्नुभयो।
तर सबै भन्दा उज्जवल ब्रिटिश प्रशंसक स्वाग शैली हेर्न। के यी मानिसहरू? को ब्रेव्स, तपाईं संयोजन गर्न अनुमति जो एक ककटेल पोशाक , जूता संग फिक्का नीलो लगाउने जीन्स, Hercule Poirot को ब्रिटिश झण्डा र जुङ्गा देखाउँदछ एक टी-शर्ट, संग कलिलो च्यातेर।
कठोर? हो, एक निश्चित हदसम्म। तर यो यस्तो आवश्यकता छ र फरक युवा र बेचैन। आखिर, युवा - यो सबै व्यावहारिक परीक्षण गर्न सबै भन्दा राम्रो समय छ।
वसन्त कपडाहरु: वर्णन र समीक्षा
संकुचित जिन्स: कसरी लगाउने र के लगाउन? जिन्स कसरी संकुचित गर्छन्?
के बाट सेतो प्यान्ट लगाउन?
कसरी lacquered जूता हेरचाह गर्न? जुत्ता हेरविचार
Charozetta: प्रयोगको लागि निर्देशन
प्रकार, उद्देश्य र बेयरिंग को पदनाम
Vyshnevolotskaya जलाशय, Tver क्षेत्र: इतिहास, वर्णन, मनोरञ्जन, माछा मार्ने
रेखाचित्र बोर्ड कसरी चयन गर्ने?
नर्वेजियन पार्क - सबै भन्दा राम्रो स्थान बाहिरी उत्साही लागि
वयस्क मा रूबेला
सारा औंला छल्ले - उज्ज्वल र बोल्ड लागि सामान
Byurer। को sinister बौना को Stalker र इतिहास
"एडिडास पर्श डिजाइन": कार र मात्र जूता
को वास्तु टुकडी के छ। को मास्को Kremlin को वास्तु टुकडी
डरेन क्रस, वा पहेंलो अरिङगाल
कसैले के मतलब यसो: 'म अक्सर बदबूदार मजाक छु!'